विश्वमा कोरोना भाइरस: कुन देशमा कस्तो छ असर ?
अहिलेसम्म चीनसहित विश्वभरि झन्डै ७५ देशमा ९०,००० मानिसमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। झन्डै ९० प्रतिशत सङ्क्रमण चीनमा पाइएको छ। चीनको हुबे प्रान्तबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस सबैभन्दा धेरै त्यहीँ प्रभावित भएको छ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले ७५ देशका ९० हजार २ सय ७६ जनालाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ८३ जना रहेको छ । ४५ हजार ७ सय जना रिकभर भएर फर्केका छन् । चाइनामा ८० हजार १ सय ७७ जना संक्रमित भएका छन् । २ हजार ९ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । ४४ हजार ८ सय ४५ जना निको भएर घर फकिएका छन् । ७ हजार १ सय १० जना गम्भीर प्रकृतिको विरामी भएका छन् । ७ सय १५ जना सस्पेक्टेड भएका छन् ।
चीनबाहिर कुल ८,८०० जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ। तीमध्ये इरान, दक्षिण कोरिया, इटली र जापानमा ८१ प्रतिशत व्यक्ति सङ्क्रमित छन्। साउथ कोरियामा ४३ सय ३५ जना संक्रमित भएका छन । २८ जनाको मृत्यु भएको छ । ३१ ज्ना ठिक भएका छन् । इटालीमा २ हजार ३६ जनामा संक्रमण देखा परेको छ । ५२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १४९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
इरानमा कोरोना भाइरसका कारण ६६ जनाको ज्यान गएको छ । १ हजार ५ सय १ जना संक्रमित भएका छन् । २ सय ९१ जनालाई ठिक भएको छ । इटलीको उत्तरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यहाँ सोमवारसम्म १ हजार ८३५ जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ। इरानमा त्यहाँका सर्वोच्च नेताका एक सल्लाहकारसहित ६६ को मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाको वाशिङ्टन राज्यमा सोमवार थप चार जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अहिले विश्व अन्चार्टर्ड टेरिटरी अर्थात् अनुमान गर्नै नसकिने बनेको बताएको छ । डब्ल्यूएचओका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले उक्त भाइरस अद्वितीय भएको तर उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन् । विश्वभरि कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या ३,००० नाघेको छ। सङ्क्रमण र मृत्यु हुने अधिकांश मानिस चीनका हुन्। तर, केही सातायता चीनबाहेक अन्यत्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नौगुनाले बढेको देखिएको छ।
डब्ल्यूएचओले कोभिड १९ सँग सङ्घर्ष गर्न सबैलाई काम लाग्ने एउटै उपाय नभएको भन्दै डा. गेहब्रेयससले सबै देशलाई आफ्नो अवस्थाबारे विचार गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रत्येक देशको आफ्नै तरिका हुनुपर्छ तर थालनी भने नियन्त्रणबाट गरिनुपर्छ भनेका छन् । अहिलेसम्म ६२ देशले सङ्क्रमण भएको जानकारी दिएका र तीमध्ये ३८ देशमा १० भन्दा कम व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएको उनले बताए।
धेरै सङ्क्रमण भएको भए पनि चीनले पनि रोकथाम सम्भव छ भन्ने देखाएको उनले बताएका छन् । कोरोनाभाइरसलाई विश्वव्यापी महामारी भन्ने वा नभन्ने बारे डब्ल्यूएचओले निरन्तर निगरानी गरिरहेको उनले बताएका छन् । दक्षिण कोरिया, इटली, इरान र जापानमा फैलिएको सङ्क्रमण अहिले मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। इरानमा डब्ल्यूएचओका एक कर्मचारीमा पनि सामान्य लक्षणसहित कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको उनले बताएका छन् ।
नोवेल पुरस्कारका लागि ट्रम्पको नाम सिफारिस
ट्रम्फले “आतंकवादी”संगठनको रूपमा घोषणा गर्ने भनेका ‘एन्टीफा’ बारेका सात तथ्य